IHighlanders Ibhuqa iCaps United Ngendlela Eyethusayo
Nkwenkwezi 05, 2014
BULAWAYO — Amaqembu omdlalo wenguqu adlala esigabeni se Premier Soccer League asedlela evalweni ngemva kokuvuka isilo eseganga okwenziwe liqembu le Highlanders lapho libhuqa iqembu le CAPS United ngeNsonto enkundleni yeMagumeni.
Amahlolanyama andiza ephezu kwengalane yemiklomelo elemiklomelo elitshumi lambili ngemva kwemidlalo eyisithupha esidlalwe lonyaka esigabeni se Castle Premier Soccer League.
Iqembu le Bosso libhuqe ele Makepekepe ngendlela eyethuse amanye amaqembu elincintisana lawo kusigaba saphezulu ngoba indlela elidlale ngayo itshengise ukuba selilolongekile selibukhali njengesikhali esilolwe ngomlalazi.
Ngemva kweqembu leHighlanders kundawo yesibili kuleqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu ele ZPC Kariba lona elilingene ngemiklomelo lele Bosso kodwa likundawo yesibili ngoba lihlohle kalutshwane.
Zombili iHighlanders le ZPC yizo kuphela ezingakadliwa lonyaka kuthi kundawo yesithathu kuleqembu le Hwange lona elidliwe okwakuqala lonyaka lapho litshaywa ngele How Mine ngoMgqibelo enkundleni yeLuveve.
IHwange ilemiklomelo elitshumi lanye njalo ilingene ngemiklomelo leqembu le Buffaloes lona elitshaye intshantshu zanyakenye iqembu le Dynamos ngeNsonto enkundleni ye National Sports.
Kundawo yesihlanu kule How Mine elemiklomelo elitshumi njalo leliqembu lilingene ngemiklomelo leqembu leShabanie Mine kuthi kundawo yesikhombisa kuleqembu le Chicken Inn lona elilemiklomelo eyithobamunwe munye njalo lilingene ngemiklomelo le Dynamos, iFC Platinum kanye le Chapungu.
Iqembu le CAPS United likundawo yetshumi lanye lilemiklomelo eyithobaminwe mbili kuthi ngaphansi kwalo kule Bantu Rovers le Black Rhinos ezilemiklomelo eyisithupha kubesekulandela iqembu le Triangle elikundawo yetshumi lane lilemiklomelo emihlanu, ngaphansi kwalo kule Chiredzi elemiklomelo emine, kuthi emsileni kuleqembu le Harare City elingakawudobhi umpaka kumidlalo yalonyaka njalo kalila ngitsho lowodwa umklomelo.
Intshantshu yakuleli kucele labesifazane uRutendo Nyahora uqede ekundawo yesihlanu kuhlandla lomncintiswano we Spar Women’s Challenge eliqhutshelwe endaweni yase Port Elizabeth ngoMgqibelo odluleyo.
Onqobileyo kulumjaho ngu Lebo Phalula oyisizalwane se South Africa okunguye njalo onqobe kuhlandla eliqhutshelwe endaweni yase Cape Town ngenyanga edluleyo lapho uNyahora aqede khona ekundawo yesine.
Omunye umdlali wase Zimbabwe uConstance Nyasango uqede ekundawo yetshumi lanye ngoMgqibelo njalo bobabili uNyahora laye uNyasango bebencintisa kumjaho wamakhilomitha alitshumi.
Lumncintiswano uqhubekela phambili ngenyanga ezayo lapho ozaqhutshelwa khona eMaritzburg kuthi ngenyanga kaNcwabakazi uzakuba se Durban lase Pretoria ubusucina eJohannesburg ngenyanga ka Lwezi.